Imidlalo engu-15 efana neRoblox (2020) - Ezinye izindlela ezihamba phambili - Ukudlala
Ngaphambi kokukhishwa kweRoblox, umqondo wohlelo lokudala umdlalo lwaluhluke ngokuphelele. Ekugcineni, ngemuva kokukhishwa kwe- URoblox , imiqondo yaguqulwa futhi yanikeza nemidlalo eminingi efana neRoblox.
Kule ndatshana, sizokwabelana ngama-sandbox amahle kakhulu nezihloko ze-MMO ezifana neRoblox ngezindlela eziningi. Ungathola eminye yale midlalo iphephe futhi ingcono kuneRoblox nayo.
Imidlalo efana neRoblox - Izindlela eziyi-15 zokudlala
I-Trove iyi-Massively Multiplayer Online ne-Sandbox uhlobo lomdlalo. Lo mdlalo ufana noRoblox futhi uvumela abadlali ukuba bathole futhi bahlole imvelo futhi bahlanganyele ezenzakalweni ezijabulisayo.Ungakwazi nokwakha ikhaya lakho elaziwa njengetshe legumbi.
Umdlalo uze uvumele abadlali ukuthi bakhethe ezifundweni ezahlukahlukene ze-Gameplay ezinjengeKnight noma iDracolite.Ungenza ngokwezifiso uhlamvu lwakho ngokuya ngokuzikhethela kwabo.
2. Imodeli kaGarry
Lo mdlalo unikeza ihluzo ezimangalisayo. Ngokungafani neminye imidlalo eku-inthanethi efana neRoblox, umdlalo kaGarry's Mod awunanhloso.Ungenza konke ofuna ukukwenza ngaphakathi kwalo mdlalo. Futhi, ungasebenzisa izinto ukudala izikhali ezintsha, izinto zemvelo, kanye nezimoto.
Usebenzisa indalo yakho ungavele ushayele indawo noma ushaye indiza ukuthola nokuhlola konke nakho konke.I-Garry's Mod ize ivumele nabadlali bayo ukuthi bahlanganyele njengoba isekela i-Multiplayer Gameplay.
3. UCastleMiner Z
ICastleMiner Z ngumdlalo we-sandbox wokusinda. Imvelo yonke yomdlalo ibonakala iphefumulelwe yiMinecraft. Ukuze usinde emdlalweni, uzodinga ukwenza izikhali futhi usebenzise izikhali ezifanayo ukulwa nezilo.
Usebenzisa imodi yokudala ungasebenzisa amabhlogo ahlukahlukene ukwakha izakhiwo ezihlukile futhi ungagcina nokudala kwakho kulo mdlalo ngokuthembeka okumangalisa kakhulu.ICastleMiner Z itholakala kuphela kwiWindows PC.
IBlockheads ngumdlalo oyingqayizivele wokusinda. Ivumela abasebenzisi bayo ukwenza ubuciko, ukwakha, ukuhlola, nokunye okuningi ngaphakathi komdlalo. Itholakala kuma-smartphone e-Android nawe-iOS. Izici ezintsha zengezwa kumdlalo ngezibuyekezo ezijwayelekile zesoftware futhi.
Ku-The Blockheads ungabheka izindawo ngezimo zezulu ezahlukahlukene kanye nezinkathi futhi.Ngenkathi udlala lo mdlalo, uzohlangabezana nezimo eziningi zangempela ezifana nesimo sezulu esibandayo phakathi nobusuku. Esimweni esinjalo, uzodinga ukusebenzisa izinsiza zakho ukwenza umlilo womlilo futhi usinde emdlalweni.
5. Ujamu Wezilwane
I-Animal Jam ngumdlalo oyingqayizivele njengoRoblox futhi awudingi ngisho nokuyilanda njengoba kuwumdlalo oku-inthanethi. Ngokufanayo noRoblox, ku-Animal Jam ukudlala le midlalo njengohlamvu lwesilwane.
Uma udlala lo mdlalo okokuqala, ungazizwa sengathi lo mdlalo wenzelwa abancane kepha njengoba udlala lo mdlalo, kuba mnandi kakhulu. Izilwane zingenziwa ngezifiso njengokukhetha kwakho.
6. Amazwe weLego
Masibe neqiniso, bekuyisifiso sethu sobuntwana ukuba neqembu elikhulu lamaLego Blocks. Ngokudlala i-Lego Worlds ungenza iphupho lakho lobuntwana lokuba namabhulokhi we-lego angenamkhawulo abe ngokoqobo ngisho namanje. Ifana kakhulu neRoblox, iLego Worlds inikela ngokuhlola imvelo.
Into emangalisayo yonke imvelo yalo mdlalo yakhiwe ngezitini ze-LEGO. Ungadala noma yini oyifunayo kulo mdlalo wesitayela se-sandbox.
Uma uthanda ukudlala iRoblox ke iMyruna ngumdlalo ofanele kuwe. Ngenkathi udlala iMyruna uzokujabulela ukwakheka okunzulu nokwakhiwa kobuciko ngaphakathi komdlalo.
Futhi, kunegeyimu encane yokudlala indima eMythruna uqobo. Ngokusho konjiniyela, umdlali ngamunye uzoba yingxenye yendaba eyingqayizivele ngokuya ngenkambo yabo yokusebenza.
Lo mdlalo ufana neLego Worlds. IBlockland empeleni ngumdlalo wokwakha izitini ovumela abasebenzisi bawo ukuthi bahlole imvelo futhi bakhe izakhiwo endleleni.
Lo mdlalo we-sandbox ungadlalwa kuzo zombili izindlela zomdlali oyedwa kanye nezindlela zemidlalo yabadlali abaningi.IBlockland ngumdlalo wabadlali abaningi online.
9. Ukudalwa kwamakhono
Omunye umdlalo njengoRoblox ohlwini yiCreativerse. Lo mdlalo we-sandbox ukhululekile ukudlala. Ngokuyinhloko umdlalo wokuphila onikeza ukuhlola izindawo futhi njengoba uhlola uzohlangana nezimbali nezilwane.Ngokuya ngokuthanda kwakho ungadlala lo mdlalo nabangane noma umndeni noma amaseva womphakathi.
Uma uqhathanisa ihluzo, iCreativerse ingcono kuneRoblox.Ungadlala kalula i-Creativerse kuma-Windows nakuma-macOS computer nakuma-desktops.
I-Minecraft ngomunye umdlalo othandwa kakhulu futhi unegama elikhulu kuhlobo lwemidlalo ye-Massively Multiplayer Online. Lo mdlalo uvumela abasebenzisi bawo ukuthi bakhe noma yini abangayicabanga. IMinecraft isize ukuziqhayisa ngomunye wemiphakathi yemidlalo emikhulu futhi esebenzayo kakhulu.
Yize lo mdlalo unezithombe ezisezingeni eliphansi. Kepha, umdlalo unikeza izindawo ezimangazayo kubasebenzisi bawo njengemihume, imizimba yamanzi, amahlathi, nokunye okuningi. Ukuze uthuthuke ngokuqhubekayo, kufanele umane uzulazule ubheke imvelo, bese uqedela imisebenzi ethile.
Endleleni yakho, ungahle uhlaselwe amaZombi noma izicabucabu, nezinye izidalwa eziyingozi. Uzodinga ukuphatha izikhali ukuze uzivikele.IMinecraft iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu wokudlala ongawacabanga futhi kukonke kungenye yemidlalo ehamba phambili.
Uma ufuna ezinye izindlela zeRoblox bese uhlola iKoGaMa. Lo mdlalo ungathathwa njengomunye wemidlalo yokulutha kakhulu njengeRoblox.Lo mdlalo unikeza imodi yomdlalo wabadlali abaningi. Ngakho-ke, ungakujabulela nabangani bakho abaku-inthanethi.
Ngokwentando yakho, ungadala futhi wakhe umdlalo wakho noma udlale imidlalo eyenziwe ngabanye.Futhi, kuleplatifomu, ungathola imidlalo yokudubula, imidlalo ye-arcade, imidlalo ye-RPG, imidlalo yokujaha, nemidlalo eminingi ye-adventure. I-KoGaMa ingadlalwa kunoma iyiphi i-laptop noma ithebhulethi engasebenzisa isiphequluli sedeskithophu.
12. Amashumi amane
Ngakho-ke, wonke umuntu uyazi ukuthi yini i-Fortnite. Kumahhala ukudlala umdlalo wempi royale owabelana ngezici eziningi noRoblox.Uma ngikhuluma iqiniso, ihluzo nemidlalo ye-game in Fortnite zingcono kakhulu kuneminye imidlalo eminingi efana neRoblox. Kunemidlalo emithathu yama-Fortnite okungukuthi, i-Fortnite: Gcina Umhlaba, i-Fortnite Battle Royale, ne-Fortnite Creative. Owokugcina unikeza isipiliyoni segeyimu ye-Roblox ephelele.
Kumdlalo we-Fortnite Creative, abadlali banikezwa ukufinyelela esiqhingini somuntu siqu lapho bangazakhela khona umhlaba wabo kanye nendawo yempi. Usebenzisa lo mdlalo, ungadlala imidlalo eminingana engekho emthethweni efana nezihloko zomjaho.
I-Terasology ngomunye umdlalo ofana noRoblox. Lo mdlalo wabelana ngezici ze-gameplay kuzo zombili iRoblox neMinecraft futhi. Ukuze ukhuphuke kulo mdlalo, kuzodingeka ulwe, usinde, futhi uqedele imisebenzi ohamba nayo.Kulomdlalo, abadlali bangahlola umhlaba owenziwe yibo.
Lo mdlalo unezici eziningi ezengeziwe ezengeziwe kuwo ngezibuyekezo ezalandela.
I-Terraria ngumdlalo wesitayela se-sandbox futhi ifana kakhulu neRoblox. Inikeza abasebenzisi bayo ithuba lokuhlola kulo mdlalo futhi baqedele ukuhambela okuningana. Itholakala ku-PC, MAC, Linux, Android, naku-iOS.Kulomdlalo, izindlela ezibaluleke kakhulu ukumba, ukulwa nokwakha. Njengoba igama lemodi yokwakha lisho, linikezelwe ngokukhethekile kubantu abasha bokudala.
I-Terraria ithuthukise umphakathi omkhulu eminyakeni edlule.Ukuze uye emazingeni aphezulu, uzodinga ukuqoqa izinto zokusetshenziswa nezinto zobuciko ngokuzisebenzisa. Izimpahla ezisanda kwakhiwa zizokusiza ukuqedela ukuthunywa ngejubane elikhuphukile.
15. AmaBrawl Stars
Kulomdlalo weselula, ungadlala ngokumelene ne-AI noma abanye abadlali futhi uvule amakhono amasha, Amandla, kanye namaGajethi wokuthuthukisa oxabene naye ngenkathi edlala.Uma uthanda ukudlala iRoblox khona-ke iBrawl Stars ingaba yindlela engcono kakhulu yeRoblox kuwe.
It lakhiwa Supercell. I-Brawl Stars inikeza izindlela eziningi ezihlukene zegeyimu ngaphakathi komdlalo njengeGem Grab, Showdown, Bounty, Heist. Futhi, imicimbi eminingi ekhethekile nayo isingathwa ngaphakathi kwalo mdlalo.Futhi, lo mdlalo ukhululekile ukulanda nokudlala ngokuphelele.
Ngakho-ke lena eminye yemidlalo emihle kakhulu efana neRoblox futhi efanelekile ukuyidlala.Ungazama le midlalo bese ubona ukuthi ungathanda yini.
Rabb.it Ezinye izindlela
iyini imovie yokuqala ka-harry potter
ama-movie wamahhala we-tv online kimi
iwebhusayithi ukulanda i-movie usebenzisa utorrent
kiss anime mobile ayisebenzi